AmaJakethi / amaVesti → Izingubo zokukhangisa
Amajakethi okukhangisa namavesti nakanjani kuyisinqumo esihle sonyaka wekwindla nobusika. Izingubo esizinikezayo zibukeka kahle, kepha futhi zinezinto ezisetshenziswayo. Iyasebenza ekuvikeleni ezintweni zangaphandle ezifana nomoya nemvula.
Amajakhethi namavesti angangenisi imvula namavesti
Ukusikeka kudinga ukunakwa okuningi imvula futhi isivikelo somoya, ngenxa yokusetshenziswa kwabo ezimweni ezinzima zesimo sezulu sangaphandle. Ukukhiqizwa amajakhethi namavesti kusetshenziswa ubuchwepheshe besimanje ukuze umkhiqizo uzosebenza iminyaka eminingi usesimweni esihle kakhulu ngenkathi kugcinwa izakhiwo zawo.
Izitayela ezahlukahlukene zokunethezeka nokuphepha
Kwethu isitolo uzothola amajakethi futhi kamizelki ngezitayela ezahlukahlukene zabesifazane, abesilisa, izingane ne-unisex. Ubukhulu obuningi nosayizi kukuvumela ukuthi ulungise imikhiqizo ngezidingo zakho futhi uyikhombe ngokwemibala enemibala yenkampani noma yeklabhu.
Le inketho ewusizo ikakhulukazi lapho u-oda izingubo zokukhangisaikakhulukazi uma simkhetha ukwenza ngezifiso ngokubulawa ukuphrinta ngakunye.
Bakha iqembu elibalulekile amavesti akhanyayo, ukwenza ngcono ukuphepha enkundleni nasendleleni. Zikulungele ukuhamba ngemuva kobumnyama, kanye nangezinsuku ezinamafu ngaphezulu.
Ukunikezwa kufaka nevesti yezingane ephuzi, ekhanyayo, nakanjani ezokwenza ngcono ukubonakala nokuphepha kwengane emgwaqweni noma eceleni komgwaqo phakathi kwekhaya nesikole. Kokubili kubantu abadala nasezinganeni, ama-vesti akhanyayo azosiza ekunciphiseni ubungozi bengozi enkulu ngenxa yokubonakala okuthuthukile.
Siphinde sinikele ijakhethi ekhanyayo nethuba lokuhlukanisa imikhono kanye ne-hood, elusizo ikakhulukazi ezikhathini zokushintshwa futhi noma kuphi lapho umsebenzi udinga ushintsho emvelweni nasekushiseni. Ijakhethi inebhokisi loboya langaphakathi elitholakalayo, imivimbo ekhanyayo eqinisekisiwe engu-3M, ihlangabezana namazinga we-EN ISO. Umkhiqizo ungenziwa ngezifiso, kepha ngenxa yemigqa namaphakethe amaningi, indawo yokumaka inomkhawulo, ukufinyelela kophawu lwangemuva kungemuva.
Ukuphrinta okwenziwe ngobuhle
Imihlobiso (ukugqokwa kwamakhompyutha noma ukuphrinta isikrini) kumajakethi namavesti kwenziwa ngokunakwa kuyo yonke imininingwane.
Ukunakwa ngekhwalithi ephezulu kusho ukuthi izingubo ozithengayo zizoba yinto ezimele inkampani. Inkampani yethu inepaki yayo yomshini, esivumela ukuthi silawule ngokunembile inqubo yokuhlobisa kuzo zonke izigaba, futhi ngaleyo ndlela sisabele ngokushesha lapho kuba khona ukukhubazeka kokukhiqiza.
Njengoba ukunikezwa komkhiqizo kunwetshwa nezidingo zamakhasimende, sinqume ukwenza imihlobiso sisebenzisa izindlela ezahlukahlukene, ikakhulukazi ukugqokwa kwamakhompyutha, kodwa futhi ukuphrinta isikrini, Sublimation i ukudluliswa okushisayo.
Sikumema ukuba ukulinganisa esheshayo free.
amajakhethi omsebenzi afudumeleumsebenzi wabesifazaneumsebenzi wamadoda uvalaumsebenzi wamadoda wokufakelwaamavesti omsebenzi afakwa ngciamavesti omsebenzi aboshwe ngamadodaimisebenzi ekhombisa ukuvezwaama-vests omsebenziumsebenzi ivesti Allegroamavesti omsebenzi wasehloboamavesti omsebenzi afakwa ngciimisebenzi ekhombisa ukuvezwaUmsebenzi we-OLX uvalaumsebenzi usebenza ngama-printamavesti omsebenzi wasebusikaamajakethi omsebenzi wamadodajackets amadoda asebenza ebusikaamajakhethi womsebenzi afakiwejakethi womsebenzi obonisayoekhombisa umsebenzi jackets Allegroimvula yokusebenza kwamadodasebenza amajazi emvulaamajakethi omsebenziAmajazi we-Allegro wokusebenzajackets omsebenzi omhlopheamajakhethi omsebenzi wabesifazaneamajazi asebenza ngosayizi omkhuluamajacket zomsebenzi wamadodajakethi omsebenzi wasebusikaamajakethi omsebenzi angashisi amalangabiamajakhethi womsebenzi afakiwejakethi womsebenzi obonisayoAmajakhethi asebenzayo asebusika abonakalayoamajazi omsebenzi we-olxjackets umsebenzi wokuvula imvulaamajakhethi womsebenzi wokushisaamajakhethi entwasahloboumsebenzi jackets nge ukuphrintajakethi omsebenzi ngezibonisiamajakhethi asebusikaAma-jakethi e-Allegro ebusikaamajakethi omsebenzi wasebusikaAmakhekhe womsebenzi wobusika obukhanyayoamajakhethi asebenzayo asebusika ebukeka e-Allegrojackets wemvula wasebusikaisitolo somsebenzi wamajakhethi wasebusikaamajakhethi ebusika amadodaAmajazi asebenzayo abonakalisayo ebusikasebenza jackets ebusikaamajakhethi ebusika abonakalisayoamabhantshi okusebenza okuxegayoamajakethi omkhiqizoamajazi okusebenza mascotamajazi okusebenza e-norwayamajazi okusebenza akhombisayoamavesti okusebenzaamajakhethi womsebenzi afakiwesebenza amajakhethi asebusikaizingubo zokugqokaamajakhethi asebusika
5 / 5 ( 13 amavoti )